အဓိကပါဝါ:37 KW အဆင့်သုံးဆင့်
စွမ်းရည်:2000-3000 ကီလိုဂရမ် / နာရီ
ကြီးမားသောစီးပွားဖြစ်လုံးလုံးကြိတ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း၏ကြီးမားသောစွမ်းရည်ကြောင့်လက်စွပ်သေစာကျွေးခြင်းအစာတောင့်ကြိတ်စက်ဖြစ်သည်. ၎င်းကိုစက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်, ဥပမာ, လုံးလေးများရောင်းရန်သို့မဟုတ်ဝယ်လိုအားအတွက်လုံးလေးများပြုလုပ်လိုသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပိုနှစ်သက်ကြသည် လုံးတောင့်ကြိတ်စက်လက်စွပ်
စီးပွားဖြစ်အစာကျွေးတောင့်စက်လက်စွပ်သေအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ် ကြက်အစာကျွေးစက်စက်. ၎င်းကိုအတောင့်အတောင့်များပြုလုပ်ရာတွင်အကြီးစားအသုံးပြုသည်. စီးပွားဖြစ်အစာတောင့်စက်သည်ကျယ်ပြန့်သောဆလင်ဒါပုံသဏ္hasာန်ရှိပြီးသေခြင်းသည်ဒေါင်လိုက်ဖြစ်သည်. ၎င်း၏မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ကြီးမားသောအရွယ်အစားကြောင့်, ကပြားချပ်ချပ်သေလုံးလေးကြိတ်အဖြစ်ဘုံမဟုတ်ပါဘူး. Ring die pellet စက်သည်အများအားဖြင့်လုံးလေးများစီးပွားရေးနှင့်အခြားစီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်သည်. စက်မှုလုပ်ငန်း sawdust တောင့်ကြိတ်လိုပဲ, ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားဖြစ်အစာတောင့်ကြိတ်စက်သည်၎င်း၏အရည်အသွေးမြင့်မားမှုကြောင့်လူသိများသည်, ကြီးမားသောစွမ်းရည်, ဆူညံသံ, အနိမ့်ပါဝါစားသုံးမှု, မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့်တည်ငြိမ်ပြေး.
1) သီးနှံများ:ပဲပုပ်, ပဲပုပ်မုန့်ညက် , ပြောင်း,ပြောင်းဖူး, ပြောင်းဖူးမှုန့် , ဘောဇဉ်,ငရုတ်သီးစိမ်း,ဂျုံမှုန့်စသည်တို့;
2) ကြမ်းအမျှင်: သီးနှံရိုးတံ (ပြောင်းဖူးအညှာ, sorgum အညှာ, ဝါဂွမ်း, မုဒိမ်းကျင့်, မြေပဲပျိုးပင်, နေကြာညှာ), ဖွဲ, မြက်ပင်, မြက်မုန့်ညက်, ကျောက်စိမ်း, ဂျုံဖွဲ, ဆန်ခွံ, မြက်ပင်, မြေပဲခွံ, ဝါဂွမ်းအမျိုးအနွယ်ကို shell ကိုစသည်တို့;
3) အပိုဆောင်း: သကာရည်, ဟင်းရွက်ဆီ, အမိုင်နိုအက်ဆစ်, အရိုးမုန့်ညက်, ဗီတာမင်,စသည်တို့;
ယေဘူယျအားဖြင့်, လက်စွပ်သေလုံးလေးများပြုလုပ်သည့်စက်အတွက်ကုန်ကြမ်းများမှာစီရီရယ်ဖြစ်သည်(100%) သို့မဟုတ်စီရီရယ်(60-80%) နှင့်ကြမ်းဖိုင်ဘာ(20-40%).
Pelletizing သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောကြက်အစာများထုတ်လုပ်ရန်အတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အစာကြွယ်ဝသောအာဟာရနှင့်ကြက်၊. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်စွပ်သေဆုံးကြက်ကြက်ဘဲအစာတောင့်စက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလုံးလေးတစ်ကောင်စီသည်တိရိစ္ဆာန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန်တူညီသောအရည်အသွေးရှိလိမ့်မည်.
စက်မှုအတောင့်ကြိတ်ခွဲစက်၏အတောင့်တင်းသောအခန်းအပူချိန်ကိုလေဒီယိုဒိုင်းနမစ်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ၉၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ထိန်းချုပ်သည်။, စက်စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်နိုင်အောင်.
ဤစီးပွားဖြစ်လုံးတောင့်စက်ကို PLC စနစ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်, ၎င်းသည်လုပ်အားကိုအဆင်ပြေစေပြီးလုပ်အားခသက်သာစေသည်.
စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုသည် 30% သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှထက်လျော့နည်း.
အတောင့်ကြိတ်စက်၏ဂီယာအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်အရည်အသွေးမြင့်တင်သွင်းသောဝက်ဝံနှင့်ရေနံတံဆိပ်များကို အသုံးပြု၍ မြင့်မားသောထိရောက်မှုကိုရရှိစေသည်, တည်ငြိမ်မှုနှင့်အနိမ့်ဆူညံသံ.
အဆိုပါပစ္စည်းကိုအလွယ်တကူနို့တိုက်ကျွေးရေးမြန်နှုန်းနှင့်သင့်လျော်သောပစ္စည်းစီးဆင်းမှုရရှိနိုင်ပါသည်သောဝက်အူ feeder ထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည်. ဒီပြီးနောက်, အပူပူရေနွေးငွေ့အဆင်သင့်အေးစက်ပေးနိုငျတဲ့အေးစက်သို့ဝင်. ထိုအခါ, ပစ္စည်းအပူချိန်အကြောင်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည် 64-85 ° C နှင့်အကြားအစိုဓာတ် 14-16% အဆိုပါနှိပ်ခန်းထဲသို့မဝင်ခင်. ဖိအခန်းထဲက, ပစ္စည်းများကိုသဘာဝကျကျ roller ၏မြင့်မားသောဖိအားအောက်မှာသေပေါက်မှတဆင့်လုံးလေးပုံစံသို့ compressed လိမ့်မည်.
HMK-300 1–2t / h 30kw 0.75kw 2.2kw 300မီလီမီတာ 1.5–8မီလီမီတာ
HMK-320 2–3 t / h 37 kw 0.75 kw 2.2 kw 320 မီလီမီတာ 1.5–8မီလီမီတာ
HMK-350 3–4 t / h 55 kw 0.75 kw 2.2 kw 350 မီလီမီတာ 1.5–8မီလီမီတာ
HMK-400 4–5 t / h 75 kw 1.5 kw 2.2 kw 400 မီလီမီတာ 1.5–8မီလီမီတာ
HMK-420 5–7 t / h 90 kw 1.5 kw 5.5 kw 420 မီလီမီတာ 1.5–8မီလီမီတာ